IINTSAPHO | Uhlobo Rave
Ngaba unefashoni kunye nendlela yokuphila yokubhala? Ngaba ufuna ukusebenza nathi njengombhali wenkululeko? Ukuba kunjalo, unokufaka i-resume / CV yakho kunye neesampuli zokubhala zabahleli ezimbini (2) works@stylerave.com.
Ukuba ufuna inyani yeendaba zelizwe lokwenyani ngamava, iStayile Rave inikezela ngeendawo zokufundela apho unokufumana ulwazi olusebenzayo oluya kukunceda kumathuba exesha elizayo.
Malunga neNkqubo yethu
Injongo yesitayile sikaRave kukwazisa abafundi ngeyona nto ibalaseleyo yaseNigeria kunye nesitayile sehlabathi, imfashini, indlela yokuphila, inkcubeko, iimpawu kunye nokunye. Sizabalazela ukukhanyisa, ukwazisa nokonwabisa abafundi kuwo onke amaqonga ahlukeneyo edijithali ngomnqweno wokugqwesa njengoko kubonisiwe ngokubhala okusemgangathweni kunye nemifanekiso.
Abagqatswa abafanelekileyo abafuna ukujoyina iqela lethu kufuneka babenobuntu obukhulu kwaye bakwazi ukusebenza phantsi koxinzelelo lwexesha elimiselweyo kwaye bahlangabezane neemfuno zangaphakathi kwiindawo abanomdla kuzo. Abaviwa mabazibophelele kwikota epheleleyo (iinyanga ezintathu) kwaye basebenze ubuncinci iiyure ezilishumi (10) ngeveki. Zonke ii-internship azihlawulelwanga. Iileta zengcebiso ziya kunikwa emva kokugqitywa kwenkqubo. * Zonke izikhundla zikude ngeli xesha.
Abaxhasi/UMhleli: Abahleli basemsebenzini baya kuba namathuba wokuba amabali abo apapashwe, aya kuthi akhe iphothifoliyo yokubhala eyimfuneko ngamathuba amakhondo emisebenzi kwixesha elizayo kwimidiya, nokwenza unxibelelwano oluza kunceda kwimisebenzi ezayo.
Vavanya ukukhutshwa kweendaba
Inqaku lokujonga iziqwenga zabahleli
Hlaziya / yenza uluhlu kunye neespredishithi
Izihloko zebali lodliwanondlebe
Thatha inxaxheba kwaye wenze igalelo kwintlanganiso yesiqhelo sabasebenzi
Uncedo ngemisitho exhaswa yi-blogazine
Ngenisa izimvo zebali kunye nezinto ezibhaliweyo
Yiba negalelo kwimidiya yoluntu
Fowunela abathengisi abanokubakho
Ukuthengisa / ukuthengisa / ukuthengisa
Yenza kwaye uqhube amaphulo entengiso
Yenza uphando lwabakhangisi abanokubakho
Ncedisa kwimibono yokufumana ingeniso
Yenza omnye umsebenzi wentengiso njengoko ubelwe
Yenza kunye / okanye uqokelele izixhobo zentlanganiso zabathengi kunye neenkcazo
Imithombo yeendaba / yeWebhu: Ukukwazi ukuhamba kwiqonga ledijithali njengenkqubo yolawulo lwemixholo yewebhusayithi, i-Facebook, i-Twitter, kunye ne-Instagram kufuneka ngenxa yesi sikhundla. Ezinye iimfuno zibandakanya ubuchule beekhomputha kunye nokugqwesa kweMicrosoft.
Ukwenza iikhalenda zendaba zosasazo lwenyanga
Ukuvelisa kunye nokwenza imixholo yomkhankaso eyonwabisayo
Ukufakwa komxholo wokuphakanyiswa komxholo wewebhu kunye neziganeko ngeevenkile zemithombo yeendaba zentlalo
Ukuncedisa ngencwadi yeendaba nge-imeyile
Ukuncedisa ekucoceni idatha ye-imeyile kunye noluhlu lwewebhu web directory
Ukuncedisa kumsebenzi wophando lwewebhu
Photography: Sikhangela i-Lagos okanye iifoto ezisekwe kwi-Abuja zokugubungela imicimbi kunye nomzi-mveliso owabelweyo. Abagqatswa abafanelekileyo kwesi sikhundla banokuguquguquka, ukuhleleka, ukuphendula.
Ukudubula ukufotwa kweminyhadala kunye neeprojekthi zabathengi
Uncedo malunga nemveliso yangaphambili kunye nemveliso yangaphambili yemveliso enxulumene neefoto zemifanekiso
Ukumiliselwa kwempahla yeefoto kwiwebhu
Ukwenza umsebenzi onxulumene neendlela ezahlukeneyo zedijithali
Abaviwa abanomdla kufuneka bathumele nge-imeyile kwi-CV / CV yabo, ileta yokhuseleko kunye nomsebenzi womzekelo interns@stylerave.com Ukubonisa indawo yabo enomdla yokuphononongwa kunye nokuqwalaselwa.